पुरुष स्तन ठूलो र कडा के कारणले हुन्छ ? - यौन जिज्ञासा र समाधान - साप्ताहिक
पुरुष स्तन ठूलो र कडा के कारणले हुन्छ ?
आश्विन २, २०७४
म २१ वर्षीय युवक हुँ । मेरो स्तन केही बढेको छ र भित्र केही कडा वस्तु छ । मैले नेटमा खोज्दा यस्तो स्थितिलाई gynecomastiaभनिएको पाएँ । के वास्तवमै यस्तो हो ? यदि यस्तो हो भने यसलाई कम गर्ने उपाय के होला ? मलाई साथीहरूका अगाडि सर्ट वा अन्य लुगा फेर्नसमेत असजिलो लाग्छ ।
स्तन भन्नासाथ हामी सामान्यत: महिलाको नै सम्झन्छौं, तर पुरुषमा पनि विकसित नभए पनि स्तनका तन्तुहरू भने हुन्छन् । बाल्यकालमा केटा र केटीको स्तन उस्तै हुने भए पनि किशोरावस्थामा पुगेपछि महिला हार्मोनको प्रभावले केटीहरूमा स्तनको विकास तीव्र गतिमा हुन थाल्छ । किशोरावस्थामा केटामा पनि यो महिला हार्मोन केही मात्रामा बढ्छ, तर पुरुष हार्मोनको प्रभावका कारण उनीहरूको स्तन खासै वृद्धि हुँदैन । महिलाको हकमा विकसित स्तनले यौन आकर्षक बढाउँछ र महिलाको स्तनको स्पर्श महिला तथा पुरुष दुवैका लागि यौन आनन्दको स्रोत हुन्छ ।
कतिले यसलाई आत्मसम्मानको कुरा पनि मान्छन् । महिलाहरूमा स्वास्थ्यभन्दा सुन्दरताका कारणले यसको आयतनको सन्दर्भमा बढी चिन्ता गरिएको पाइन्छ, तर पुरुषमा भने त्यसको उल्टो प्रभाव हुन्छ । पुरुषमा ठूला स्तन हुनुलाई नकारात्मक रूपमा लिइन्छ । पुरुषमा स्तन बढ्ने कुरा साथीभाइ तथा नातेदारहरूमाझ लाजको कुरा हुन्छ, त्यसैले यसलाई सक्दो लुकाइन्छ । तपाईंले पनि यस्तो कुरा भोग्नुभएको देखिन्छ ।
के भएको होला ?
किशोरावस्थामा पुगेपछि सामान्यत: केटाहरूको स्तन नबढ्ने भए पनि केहीको भने स्तन ठूलो हुन पुग्छ, जसलाई अंग्रेजीमा pubertal gynecomastiaभनिन्छ । ग्रिक भाषामा gyne शब्दको अर्थ महिला र mastos शब्दको अर्थ स्तन हुन्छ, तर व्यवहारिक रूपमा यो शब्दले पुरुषहरूमा असामान्य रूपमा स्तन ठूलो हुनुलाई नै बुझाउँछ । Gynecomastia हुँदा छाम्दा रबरजस्तो अनुभव हुने पिण्ड स्तनको वरिपरि हुन्छ । आधाभन्दा बढी अवस्थामा यो दुवै स्तनमा पाइन्छ । यसमा स्तन ग्रन्थि भएका तन्तु बढेको हुन्छ । बोसोको कारणले मात्र पुरुष स्तन बढेको स्थितिलाई pseudo-gynecomastia भनिन्छ ।
तपाईंले स्तन बढेको सन्दर्भमा अन्य खासै जानकारी नदिनु भएकाले यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । यसरी स्तन ठूलो हुने सम्भावित कारणमा किशोरावस्थामा प्रवेशसँग जोडिएका परिवर्तनबाहेक स्टेरोइड औषधीको दुरुपयोग, टयुमर, वंशाणुगत खराबी, कतिपय औषधीका नकारात्मक असरजस्ता अनेक कारण हुन सक्छन् । स्तन क्यान्सर हुँदा यस्तो एउटा स्तनमा मात्र हुन्छ भने स्तनको छाला दबेको वा मुन्टोबाट कुनै श्राव आएको हुन सक्छ, तर यस्ता कुरा विरलै मात्र भएको पाइन्छ ।
सामान्य रूपमा पाइने हार्मोनको मात्रामा भएको गडबडीले स्तनको तन्तुमा पारेको असरका कारण यस्तो हुने देखिन्छ । स्तन यसरी बढ्ने स्थिति किशोरावस्थादेखि बाहेक शिशु वा प्रौढ अवस्थाका पुरुषमा समेत देखिन्छ ।
समाधान के होला ?
तपाईले स्तन बढ्ने कुरादेखि बाहेक अन्य जानकारी दिनुभएको छैन । तपाईंमा देखिएका विविध पक्षको जानकारीपछि नै त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । समाधानको महत्वपूर्ण पाटो तपाईंको स्तन बढ्नुको कारण pubertal gynecomastia हो कि होइन, पक्का गर्नु हो ।
सामान्यत: pubertal gynecomastia का लागि कुनै उपचार आवश्यक हुँदैन । यस्तै ४ सेन्टिमिटरसम्म बढेका स्तनका तन्तु (७५ प्रतिशत जति किशोरमा) कुनै उपचार बिना आफैं हराएर जान्छन् र ३ वर्षभित्रमा यस्तै ९० प्रतिशतमा यो लक्षण आफैं नै केही महिनामा वा किशोरावस्था सकिएपछि हराएर जान्छ, तर बाँकी १० प्रतिशत जसको स्तन ठूलै रहन्छ, जस्तो कि तपाईको । स्तन ठूलै रहेको अवस्थामा त्यसका लागि केही गर्नुपर्ने हुन सक्छ । स्तन खासै ठूलो छैन भने तपाईंलाई आफ्नो शरीरको प्रतिविम्ब (body image) का बारेमा परामर्श तथा desensitization गरे मात्र पनि पुग्ला, तर यो अलि ठूलै छ भने शल्यचिकित्सा गराउनुपर्ने हुन्छ ।
शारीरिक रूपमा शल्य चिकित्साबाट स्तनको आकारलाई कम गरे पनि यसरी स्तन ठूलो हुनुले परेको मानसिक पक्षमा पनि सामाञ्जस्यता ल्याउनुपर्छ । स्तन ठूलो हुँदैमा तपाईंको जीवन नै बर्बाद हुने होइन, त्यसैले अनावश्यक रूपमा निराश हुनुको सट्टा अब कसरी स्तनलाई सानो बनाई सकारात्मक रुपमा जीवन जिउने विचार गर्नुहोस् ।
अर्काे ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने पाटो के पनि हो भने स्तन बढ्नुको कारण pubertal gynecomastia होइन भने के कारण हो ? त्यसैले यसका अन्य पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । शरीरमा कुनै खराबीका कारण जस्तै कि हार्मोनको कमी, अण्डकोषको टयुमर, hypothyroidism मृगौलाको दीर्घरोग अनि कुनै हार्मोनको मात्रा वा असरलाई कम गर्ने औषधीको सेवनजस्ता स्थिति त्यसका लागि जिम्मेवार हुन सक्छन् जसको खोजबिन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्त्यमा के भनौं भने अनावश्यक रूपमा निराश हुनुको सट्टा यसको उपचारतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुहोला ।
प्रकाशित :आश्विन २, २०७४
२०७४ साललाई के कारणले सम्झनुहुन्छ ?
बुद्धको नाममा पनि ठूलो व्यापार
पातलो वीर्यले सन्तान हुन्छ ?
प्रेमको मात ठूलो कि धनको मात ?
के सलमान आउँदैमा देशको विकास हुन्छ
मधुमेहले उत्तेजनामा समस्या हुनसक्छ
स्वास्थ्य राम्रो बनाउन माघ ९, २०७५
स्तनको आकार कसरी बृद्धि गर्न सकिन्छ माघ २, २०७५
कुकुर सँगको यौन सम्पर्क र यौनरोग ​​​​​​​ पुस २५, २०७५
यौनसम्पर्क सन्तान उत्पादन र महिनावारी पुस २१, २०७५
भिरिंगी रोग र यसको उपचार पुस ५, २०७५
चाहिएको बेला किन लिंग उत्तेजित हुँदैन् पुस १, २०७५
लिंगको नाप र खुकुलो कन्डम मंसिर २१, २०७५
सानो लिंग र लिंग ठूलो बनाउने उपाय मंसिर १४, २०७५
यौनसम्बन्धी गम्भीर समस्या र समाधान मंसिर ७, २०७५
कसरी आनन्दसँग सम्पर्क गर्ने ? कार्तिक १५, २०७५